ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone X နှင့်အထက်ကို 3D print head ဖြင့်သော့ဖွင့်ပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone X နှင့်အထက်ကို 3D print head ဖြင့်သော့ခတ်နိုင်မည်လား။
Forbes ၏သတင်းထောက်သောမတ်စ်ဘရက်စ်တာကပြုလုပ်သောဤစမ်းသပ်မှုအသေးစိတ်ကိုမစတင်မီ Face ID အာရုံခံကိရိယာနှင့်ဤလုံခြုံရေးအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်ဟုဆိုကြသောအခြားအက်ပလီကေးရှင်းမဟုတ်သောကိရိယာများဖြင့်စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ terminals လုံခြုံရေးဆိုတော့ Apple ကအမြဲတမ်းထူးခြားတာတစ်ခုပါ။ Touch ID ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုသတိရလာသည် Apple သည်၎င်းကိုပထမဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမဟုတ်သည်မှာမှန်ပါသည်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်အံ့ဖွယ်လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုပထမဆုံးရရှိခဲ့သည်။
ဒီနေ့ iPhone မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာက facial sensor (သို့) Apple က Face ID လို့ခေါ်တယ်။ အမြဲတမ်းစမ်းသပ်နေတဲ့ sensors တွေ၊ အထက်ပါ Touch ID နဲ့တူတာကဒါကိုပထမဆုံးအကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ပေမဲ့ သူတို့တကယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့ပုံရတယ် ဒီနေ့ငါတို့တွေ့မယ် ဤအအာရုံခံကိရိယာများအတွက်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများစမ်းသပ်မှုတစ်ခု ဒါက iPhone X နဲ့အထက်ကို 3D မှာဖန်တီးထားတဲ့ Head နဲ့အတူသော့ဖွင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်မလားစစ်ဆေးပေးလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရသောတောင်းဆိုမှုအများဆုံးစမ်းသပ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Apple သည်၎င်း၏ Face ID ဖြင့်တကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြီးဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအဘို့, Samsung Galaxy S9၊ Galaxy Note 8၊ OnePlus, LG G7 ThinQ နှင့် iPhone X. ယခုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်မှုကိုပြသသည့်ဗီဒီယိုကိုသာကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ သုံးစွဲသူများအားလုံး (သူတို့တွင် iPhone ID ရှိပါက Face ID ပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေ) Apple မှ ၄ င်းတို့ iPhone ထဲသို့ထပ်ဆင့်ထည့်သည့်လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုသည်။
iPhone X သည်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အရာသည်သူတို့မျက်လုံးများနှင့်စနစ်အတွက်သုံးသောအချက် ၃၀,၀၀၀ အမှတ်အသားပေးသည့်စနစ်မဟုတ်သောကြောင့်သော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုသူသိသည်။ ဒီ iPhone X နဲ့ LG တို့ဟာဂျာနယ်လစ်ကို 30.000D ပုံတူကူးချဖို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်စေခဲ့တာတွေပါ iPhone X ကိုသော့မဖွင့်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီစမ်းသပ်မှုတွေဟာသိသာထင်ရှားပြီး Apple ရဲ့မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်ကတကယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့ရလဒ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမအံ့သြစေပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone အတွက် X ကို » ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone X နှင့်အထက်ကို 3D print head ဖြင့်သော့ခတ်နိုင်မည်လား။
သင်ပုံနှိပ်။ မရနိုင်ပါ၊ မှန်ကန်သောပုံစံကိုပုံနှိပ်ထားသည်။
iphone x နှင့် lg မှအပကျန်အားလုံးသော့ဖွင့်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၄ မိနစ်ဗီဒီယိုကိုသင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်
အိပ်ချ် Flores ဟုသူကပြောသည်
Emilio ဘာဘာ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်စကာ, ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ် "ပုံနှိပ်" ကိုငါမြင်သောအခါငါက၎င်း၏အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မှတ်ချက်များကိုဖြောင့်သွားကြည့်ဖို့ကြောက်လန့်!
လူတိုင်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်သည်။ RAE ၏အဆိုအရပုံစံနှစ်မျိုး (ပုံနှိပ်၊ ပုံနှိပ်) သည်မှန်ကန်သည်။
iOS ပေါ်ရှိ Safari မှ Chrome သို့ bookmark ထည့်သွင်းနည်း
သင့်ရဲ့ ၀ ယ်ယူမှုကိုတရားဝင် Apple Store တွင်အတိုးမရှိဘဲငွေကြေးထောက်ပံ့ပါ